IINGCAMANGO EZILI-143 ZEKHITSHI YOYILO - UYILO LWEKHITSHI
izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba
Eyona uyilo Lwekhitshi Iingcamango ezili-143 zeKhitshi yoyilo
Iingcamango ezili-143 zeKhitshi yoyilo
Likhangeleka njani ikhitshi lokugqibela kuwe? Iingcamango zoyilo lwekhitshi ezifumanekayo kweli phepha zikubonisa indlela abaninimzi, abayili bezakhiwo, kunye nabayili abayidibanise ngayo ifom, kwaye basebenza ukwenza iikhitshi zabo zokuphupha ezifanelekileyo. Le galari yomfanekiso wekhitshi inamaphepha ama-3. Ungafumana ( Iingcamango zeKhitshi Icandelo 2 ) kunye ( Iikhabhathi zekhitshi yesiqhelo Icandelo 3 ) Apha.
Zininzi izinto ezahlukeneyo ezifumaneka kwiikhitshi ezitofotofo. Ezinye zezinto ezinqwenelekayo zekhitshi lamaphupha zibandakanya:
Iikhabhathi zasekhitshini zesiko
Iziqithi (zihlala zikhulu ngezitovu ezakhelweyo okanye esinkini)
Amacandelo okutya (aqhotyoshelwe usingasiqithi okanye isiqithi)
Izixhobo zentsimbi ezingenasici
Izitshini zekhitshi (Zenziwe ngentsimbi engenasici, imabhile / igranite, okanye ityhidiweyo okanye ityhidiweyo)
Ipendenti yesiqhelo kunye nezibane ezikhanyisiweyo
Izitovu zegesi (Kunye nezitshisi ezininzi kunye namandla aphezulu e-BTU)
I-Hardwood okanye i-tile flooring
Tile back-splashes (Kwimibala eyahlukeneyo kunye noburhabaxa)
I-Quartz okanye i-top top counter counter
Iiglasi ezibonisa ngaphambili iikhabhathi kunye neekhabhathi
Ukuba ukwinqanaba lokucwangciswa lokulungiswa kwezinto kukho iindlela ezahlukeneyo Isoftware yoyilo ekhitshini iinkqubo ezinokukunceda ukongeza ezinye zezi zinto kwindawo yakho. Nokuba ujonga izimvo zokwenza ikhitshi elifanelekileyo lobuchule bokupheka, okanye njengendawo entle yokuhlanganisana, uqinisekile ukufumana into oyithandayo kwimifanekiso ekweli phepha.
Iikhitshi ezineeKhabhathi eziMhlophe
Iikhitshi ezineeKhabhathi eziMnyama
Uyilo lweKhitshi Iingcamango
Kumfanekiso ongentla kwemigca ecocekileyo yeli khitshi likhulu liqaqanjiswa yimibala yayo emhlophe eqaqambileyo. Isityebi esityebileyo somgangatho okhuni somthi sitsala iliso kwaye siboleke imvakalelo yokufudumala kwigumbi. Umthi omnyama womgangatho ume ngokuchaseneyo nobumhlophe obucocekileyo beekhawuntari kunye neekhabhathi kunye nehobe elithambileyo lehobe eludongeni lwekhitshi. Iingcango zekhabhathi ezingaphambi kweglasi zivumela i-kitchenware ukuba iboniswe kwaye ivumele indawo ukuba ibe lula. Ibha yesiqithi eqinileyo yomthi embindini iankile igumbi. I-bar top top ye-bar ibonelela ngendawo ecocekileyo nenomdla kubapheki ukuba benze umsebenzi wabo.
Le khitshi inkulu isisityebi sineenkcukacha kunye nobuhle. Ikhabhathi ye-oki yobusi icaciswe kakuhle kwaye ifakwe kwizibalo zokukhanya ze-granite ze-beige. Isiqithi samanqanaba amabini asekhitshini sinika ukutya okuninzi kwindawo yokuhlala kwizitulo zebha yomthi. Ukurhoxa, ikhawuntari ephantsi, kunye nokukhanya kwesibane kubonelela ngokukhanya okuninzi. Ukuchukumisa okuphezulu njengefriji yentsimbi engaphezulu, i-oveni kunye neesinki ezimbini zivumela umpheki kusapho ithuba elininzi lokuchukumisa. Ndwendwela eli phepha ukongeza Izimvo zesiqithi sekhitshi ukulungelelaniswa kwezitayile.
Ubukhazikhazi obukhazimlayo obomvu obumdaka kolu lonwabo Iikhitshi zeenkuni ze-cherry Imigangatho kunye neekhabhathi ezibomvu ze-mahogany zinefuthe lokufudumala kwigumbi lonke. Iithowuni ezifudumeleyo kunye nokuhombisa okugudileyo komthi wecherry ngokuchaseneyo nokuziva kupholile kweetafile kunye neendonga ezomeleleyo ezimdaka ngombala. Izixhobo zentsimbi eziqaqambileyo zentsimbi ezigqamileyo zibonakala kakuhle ngokuchasene nomthi omnyama wekhabhathi yemithi emnyama emnyama.
Izibane ezixhonyiweyo phezu kwemarble ebunjiweyo yokhuni lwesiqithi-bar yenza ukukhanya okuthambileyo kwindawo yokusebenza. Imibala etyebileyo kunye nokungafani kwegumbi kuyinika ukuziva okucocekileyo nokusondeleyo ekulula emehlweni. Iindonga zokukhanya kokhilimu kunye nophahla olumhlophe zinceda ukulinganisa imibala emnyama yomthi, kunye nemiphezulu yeetafile ze-beige granite. Ukugqitywa kwentsimbi engenasici kwizinto zombane kushiyeke kubonisiwe, kunika ulungelelwaniso oluhle lwemibala kunye noburhabaxa kwisithuba.
Iikhabhathi ezimhlophe ezinegranite emnyama
Amathoni amhlophe kunye nokhrim ale khitshi yemveli adala ukuba aphelelwe lixesha kodwa ahlaziyeke. Izibane ezibini ze-pendulum ezihonjiswe ngeglasi entle ezimilise imibala yeglasi zibonelela ngokukhanyisa okucacileyo kumagumbi esidlo sakusasa. Ngaphantsi kokukhanya okuthambileyo, izinto zokubala ezibini ezimnyama-zegranite zebha yesidlo sakusasa zithatha i-sheen ethambileyo. Indawo yokugcina eyongezelelweyo iyafumaneka ngokubeka ngokufihlakeleyo iikhabhathi zepaneli eziphantsi kwebar. I-Quirky, ukuthinta okungahleliwe njengephethini yeVersailles kwimigangatho yayo engwevu engwevu kunye nomfanekiso omkhulu wethambeka elibunjiweyo ngaphezulu kweovini yayo yenza ukuba uyilo lwekhitshi lubonakale luqhelekile.
Ikhitshi lale mihla elinomgangatho wokhuni
Eli gumbi lisebenzisa imibala eyahlukeneyo kunye namabakala emithi kuyilo lwesitayile, lwangoku. Ukusetyenziswa okubanzi kwemigangatho ekhanyayo yemithi kunye neepaneli kuyandisa la magumbi ubukhulu kwaye kuyenze ikhaphukhaphu. Ukuchukunyiswa komthi omnyama osetyenzisiweyo kwibhar yesiqithi kunye nakwezinye iikhabhathi kubambelela uyilo lwegumbi ngokubanzi kwaye umahluko obambisa amehlo uboleka imvakalelo yokuzihlaziya egumbini. Ukubekwa ngobuchule kweempawu zeemabhile-ukusuka kumhlophe othambileyo kwiincopho zokubala kunye ne-jaunty grey marble tiled arch ngaphezulu kweekhabhathi zephaneli emnyama-iboleka igumbi imvakalelo yokukhanya kunye nokukhanya okufudumeleyo.
Iikhabhathi ezimhlophe zemveli ezinobumba obumnyama
Ukuchukunyiswa kwendalo endala njengezibane ezintathu ezixhonyiweyo zependulum, iiglasi ezingaphambi kweekhabhathi, isango learched kunye neefestile zeklasi zibolekisa umoya wasekhaya kweli khitshi lihle kwaye langoku. Iindonga ezimhlophe kunye nekhabhathi emhlophe eneepaneli zinegalelo kubume bendawo oziva ucocekile, uqaqambile kwaye unomoya. Ibha yesiqithi esimise okwe-L eyenziwe ngomthi omnyama ogqunywe ngemarmore emtyibilizi isebenza njengegumbi ekugxilwe kulo kunye nekhawuntara yomsebenzi kunye nebha yesidlo sakusasa. Ipateni ebonakala ngathi ayicwangciswanga yeethayile zaphantsi zemarble grey kunye nokhilimu kunye nomhlophe omhlophe uboleka umoya wokuzonwabisa kuyilo luphela.
Ikhitshi le-Upscale elinesiqithi esimhlophe sekhabhathi kunye ne-countertop emnyama
Eli khitshi linobunewunewu lisebenzisa ngokupheleleyo ezinye zezona zinto zibalaseleyo zekhitshi lesiqhelo. Iinkcukacha ezishushu, zasekhaya zicwangciswe kakuhle ngokusetyenziswa okubanzi kweenkuni ezikhanyayo kwimigangatho, kwikhabhathi nakwifenitshala. Ikhawuntari emnyama emnyama yentsimbi yesiqithi esinezihlalo ezenziwe ngokhuni ezinqamlezileyo zibonelela ngeyona nto iphambili kuyilo lwekhitshi. Iikhabhathi zibonisa uthando olunencasa ngeenkcukacha kunye neengcango zazo eziphakanyisiweyo zepaneli kunye nokufakwa kokuhombisa kunika indawo yokugcina eninzi. Yakha kwiikhawuntari nakwizixhobo zezixhobo zokugcina izixhobo zigcina indawo ingabonakali ngathi ixakekile. Indent encinci eludongeni olukude ivumela igumbi lesimemo sakusasa esinomoya esimnandi esijonge iifestile.
Ikhitshi elintofontofo elineekhabhathi ezimhlophe kunye neetafile ezimhlophe zekartz
Ukuqaqamba nobutyebi ngamagama okuqala athi qatha engqondweni xa ujonge le khitshi yodidi. Amehlo omnye akanakunceda kodwa utsaleleke kwiminyango yaseFrance nasefestileni ekhokelela ngaphandle kwaye ujonge egadini. Imigca ecocekileyo yale khitshi ibonakalisiwe siskimu sombala esisebenzisa imibala yekrimu kunye emhlophe. Iikhabhathi ezimhlophe ezidityaniswe ngee-countertops ezimhlophe ze-quartz zibukeka zintle kunye. Umgangatho womthi onzima omnyama, kunye neetafile zomthi onzima omnyama kunye nezitulo zentsimbi yesidlo sakusasa zimile ngokwahlukileyo kamnandi kwigumbi lonke. Isitovu esivuthayo segesi esitshisayo kunye nezibane ze-pendulum zongeza ukubonwa kweenkcukacha kwaye zincedise uyilo lwamagumbi emveli.
Ikhitshi eliqhelekileyo elinamakhabethe eqinile enkuni kunye ne-grey backsplash tile kunye nokubala kweemarble
I-sheen yegolide ethambileyo yale khitshi yomthi icwangciswe kakuhle ngokukhanya kwezibane ezininzi ze-pendulum ezine-bell shades. Ikhawuntari yeplanga ebotshelelwe ziigrey marble ezingwevu ngobunono zijikeleze ibar yesiqithi esincinci esakhiwe kuyilo olufanayo. Ukubuyela umva kweethayile ezingwevu kongeza inkcukacha entle kwiindonga zekhitshi. Olu luyilo lwekhitshi lwenza elona thuba lincinci ngokufakela izixhobo ezifana noluhlu, i-oveni kunye ne-microwave kwii-nooks zabo ezakhelwe kwiikhabhathi ezingqongileyo. Umthi okhanyayo womgangatho ubonakalisa ukukhanya ukunika indawo yonke indawo enekhaya, yomoya.
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ezinesiqithi esimnyama
Ukucoceka nokungathobeki, eyona nto iphambili koku Uyilo lwekhitshi olubunjiweyo l ngumqobo wesiqithi sayo somthi esimnyama kunye nekhawuntari yentsimbi ephezulu. I-sheen yegranite ibonelela ngumahluko ococekileyo ococekileyo kunye neenkozo ezimnyama zesiseko somthi onzima. I-discrete ye-microwave nook ibonelela ngendlela eyahlukileyo yokugcina esi sixhobo kwaye siyigcine ekuthatheni indawo kwindawo yokubala. Iikhabhathi ezindala ezifakwe ipaneli kunye neekhabhathi zilungelelanisa udonga lwegumbi ukuziva ekhaya. I-hood emhlophe eyenziwe ngepani emhlophe ibonelela ngenkcukacha ezithatha amehlo kwiindonga. Ibha yesidlo sakusasa yahlula ikhitshi kwigumbi lokuhlala ngaphandle kokuvala ngokupheleleyo ikhitshi ekubolekiseni iseti yovakalelo.
Ikhitshi elinombala okhanyayo wekhabhathi kunye neetafile ezimnyama zegranite
Umtsalane weli khitshi yindlela elula yokwenza ngayo izinto kunye nokulula kokugqitywa okuhlala kungqinelana nemibala ekhethiweyo. Iitoni ezimthubi zilawula ukugqitywa okusetyenzisiweyo kwisithuba kwaye kunokubonwa kwiithayile zeceramic, ukuya kwiilaminates ezisetyenziswa kwikhabhinethi nakwiitoni ezimhlophe zodonga. Itafile yegranite emnyama kunye nebhodi yokutshiza yongeza umahluko omnyama wokophula i-yellows efudumeleyo, kodwa kukuchukumisa okuhle ekwenzeni imbonakalo elungelelanisiweyo yanamhlanje.
Ikhitshi elinamakhabethe amhlophe kunye nesiqithi sebhloga
Imigca emhlophe ecocekileyo kunye necrisp yeli khitshi isetiwe kakuhle kukuchukumisa okucacileyo kwezinto ezimnyama. Izibane ze-Pendulum ezineentsimbi zentsimbi kunye nezibane ezikhanyayo kwisilingi zenza ukukhanya kwisiqithi esiphakathi. Isiqithi sesiqithi sisidibaniso esinomdla sokudibanisa itafile kunye nebala. Cwangcisa isitulo somthi esimnyama esenziwe ngokhuni esiqithini emva kwesihlalo esinika indawo apho ukusebenza kunye nokuhlalisana kunokwenziwa khona. Indawo yefestile ye-bay ine-nook yesidlo sakusasa. Iidayimani eziphezulu zeepateni ziyindlela yokutsala amehlo yokungenisa izibane zendalo ngelixa amalaphu amnyama e-jabots athambise ilitha kwiifestile ezinkulu.
izimvo ezintle zesikhumbuzo sentombi
Ikhitshi leenkuni elimnyama elinee-countertops ezimhlophe zegranite
Iikhabhathi zomthi ezimnyama kunye neekhabhathi ecaleni kweendonga zekhitshi zibekwe kakuhle ziikhrimu kunye neethayile ezingwevu zomgangatho wayo. Beka i-herringbone patter, iithayile ziboleka umoya ococekileyo nolula kwinto enokuba likhitshi elimnyama nelimnyama. Ifestile yeglasi egudileyo egobileyo evaliweyo yenza ukukhanya kwangaphandle kukhanye kwiikhikhithi zegranite eziphezulu kwisiqithi sebar ekhanyayo. Ukufakwa kweglasi yokuhombisa kwiikhabhathi ezihonjisiweyo kuhlahlula ubumbano lwalo mthi ngomnye umthi omnyama oneplanga lekhabhathi. I-mosaic efakwe kwi-backsplash kunye ne-white marble hood hood kukuthintela kwindawo yokusebenza.
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zinokuma kuvavanyo lwexesha. Kuyinyani ngokwaneleyo, umhlophe uthathwa njengombala ongapheliyo kunye nombala weklasi ongenakuze uphume ngesitayile. Iifashoni zasekhitshini zinokuza zihambe, kodwa ukuba nekhabhathi emhlophe ekhitshini kuya kwenza ukuba ikhaya lakho liziqhelanise nalo naluphi na uhlobo, isimbo kunye nomxholo ngokulula. Oku kuyenza ibe lukhetho oluphezulu kumbala wekhitshi yasekhitshini.
Zininzi izizathu kunye nezibonelelo zokuba kutheni umhlophe ungqina ukuba lolona khetho lukhethiweyo kwikhabhathi yekhitshi. Enye yazo kukuba iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zibonelela ngenkangeleko engapheliyo kunye neklasikhi. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ayinakuze iphelelwe lixesha. Umhlophe ngumbala wobuhle kunye nobunkunkqele. Xa isetyenzisiwe kwiikhabhathi zasekhitshini, ikhupha imo yoxolo nokuzola kunye neklasi ekungekho mbala ungadibanisa.
Olunye uncedo ziikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini eziguqukayo. Ngokubanzi, umhlophe ngumbala onokuhamba nayo nantoni na, iya kuhlala injalo kwiikhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Akunyanzelekanga ukuba ukhathazeke kakhulu malunga nokuba yeyiphi i-countertop eya kuhamba kakuhle ngayo, okanye umbala wombala wodonga onokuyizalisa. Ukusebenza ngombala omhlophe wekhabhathi kufana nokusetha ikhitshi lakho kwindawo enkulu yokubhengeza, apho unokudibanisa ngokulula imibala yemibala. Ngokutshintsha nje izincedisi zakho kunye nee-aksenti zoyilo, unganika ikhitshi lakho inkangeleko entsha nanini na udinwa yindlela ebonakala ngayo. Nangona abanye bengawuthatha njengombala ocacileyo kwaye okruqulayo, umntu ngekhe ahambe kakubi ngokusebenzisa iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Isebenza kakuhle ukufezekisa iskimu sombala esincedisayo, esine-monochromatic okanye esahlukileyo ekhitshini lakho.
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zikwanobhetyebhetye xa kufikwa kwizitayile zoyilo. Amathuba oyilo olunikezelayo alunasiphelo. Nokuba ujonge le khitshi yelizwe yakudala okanye i-vibe ye-ultra yanamhlanje, iikhabhathi ezimhlophe zilungile. Xa ubhangqiwe ngombala wekhabhathi osetekeni, i-millwork efanelekileyo kunye nokugqiba, unokujonga iindlela ezahlukeneyo zoyilo ekhitshini lakho.
Umzekelo, ukuba ujonge ukubonakala kweklasikhi, unokukhetha ukunika iikhabhathi zakho ezimhlophe zasekhitshini ngobumba besithsaba kunye neepaneli zokugqibela ezimhlophe ezixineneyo, emva koko uzidibanise nekhabethe yemarmarra e-Carrara. Kwelinye icala, ikhitshi elinekhitshi elinamacandelo, linokufezekiswa ngeekhabhathi ezimhlophe zohlobo olugungqayo kunye ne-backsplash yethayile. Ukuba ufuna ukufezekisa ikhitshi yanamhlanje, sebenzisa iikhabhathi eziphezulu ezimhlophe zekhitshi kwaye uyithelekise nomphezulu omnyama wegalufa.
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zivusa ukucoceka, ukubukeka okucocekileyo. Inee-vibes ezilungileyo ezimele ubunyulu kwaye zenza indawo imeme ngakumbi. Kuba ngowona mbala uqaqambileyo, ubonakalisa ukukhanya kakuhle okwenza ukuba kufaneleke ukusetyenziswa kwiikhitshi ezincinci. Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zingenza iikhitshi ezincinci zibonakale zinkulu. Imibala ekhanyayo yenza inkohliso yendawo yokwenza amagumbi azive evulekile kwaye enomoya. Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zibonakalisa ngakumbi kuneekhabhathi ezinemibala emnyama, oko ke kunceda ekwandiseni umphumo owenziwe kukuhamba kokukhanya kwendalo.
Iphetshana loyilo olongeziweyo lokujonga iikhitshi ezineekhabhathi ezimhlophe, qiniseka ukudibanisa imibala eyahlukeneyo kuyo yonke loo ndawo ukuze uvule isithuba. Khetha ukugqiba okufanelekileyo kwii-countertops zakho kunye nekhabhinethi. Kwakhona, gcinani engqondweni ukuba umhlophe uza ngee-shades ezahlukileyo, ukusukela kokuqaqamba okumhlophe okumhlophe ukuya kwithowuni enekhephu kunye nokhrim, ke khetha umhlophe ngokugqibeleleyo kwikhabhathi yakho kuxhomekeke kwisitayile ofuna ukusiphumeza.
Izibane ze-pendulum ezinemibala ecacileyo egobileyo kunye nekhandlela elihonjisiweyo elixhonywe ngaphezulu koku Ikhitshi lompheki Isiqithi esisembindini yinkcukacha yokubamba amehlo kwinto engenye elula ukuyila. Iifestile ezixineneyo zivumela ukukhanya okwaneleyo kweli khitshi ngeefestile zebay ezibonelela ngendawo ethambileyo yesidlo sakusasa. Imigca ethe tyaba yanamhlanje yezitulo ezenziwe ngentsimbi kwibhokisi yesidlo sakusasa zilungelelene kakuhle kuyilo olugqityiweyo lwepaneli kumagumbi eekhabhathi nakwiidrowa. Ukukhanya okungaphezulu kokukhanya kunye nomoya wegumbi kuzisa i-sheen ethambileyo kumgangatho omnyama weenkuni.
Ikhitshi eliphambili elimnyama nelomhlophe eline-quartz kunye nemiphezulu yeetafile zemabhile
Leli khitshi eliqaqambileyo neliphangaleleyo lisebenzisa iithayile zamatye amhlophe ze-porcelain kubukhulu obahlukeneyo besikwere kwimigangatho yaso. Iindonga zipeyintwe ngombala okhanyayo wehobe ngombala omhlophe, iingcango kunye neefestile. Iikhabhathi zasekhitshini zakudala ezinemibala emhlophe. Ikhawuntari ephambili yekhitshi isebenzisa iGrey yetyuwa kunye nePepper yemarble phezulu, ngelixa ikhawuntari yesiqithi isebenzisa iSuper White Quartztite slab entle. Ikhawuntari yesiqithi ime ngaphandle kwekhitshi lonke njengoko iikhabhathi / imilenze yayo imnyama, nezibane ezihonjisiweyo ezimnyama ezixhonywe ngasentla.
Ikhitshi elimhlophe lekhabhathi enezinto zokubala iinkuni
Ikhitshi eliphefumlelweyo ilizwe elinomxube wezinto zakudala kunye nezinto zangoku kunye nokugqitywa. Iikhabhathi zasekhitshini ezinokubumba zonke zimhlophe, zinomdla wesilivere onomdla embindini. Iincam zekhawuntari ziziplanga zomthi eziqinileyo, ezinyangiweyo ukuze zingaboli ngamanzi kunye nokuvezwa kokufuma. Kwimigangatho, kwasetyenziswa iithayile zamatye ze-porcelain ezingwevu ezingama-60 × 60, kunye neendonga ezingwevu ezifanayo. Udonga olusemva kwekhawuntara ephambili yekhitshi lume kunye nephepha lodonga lesitena elakhiwe ngamatye kunye nomhlana omhlophe onethayile. Isiqithi esikhulu se-butcher block kunye ne-stainless range hood senza indawo ephambili.
Iikhabhathi ezimnyama zasekhitshini eziphezulu kunye ezimhlophe iikhabhathi ezisezantsi ngesiqithi sekhabhathi emnyama
Imigangatho yeplanga emnyama kunye neendonga ezikhanyayo zisebenza njengaleyo yangasemva yale khitshi ivulekileyo, kwaye olu manyano lokukhanya kunye nobumnyama luyaqhubeka kukhetho lwayo lwemibala kwiikhabhathi zasekhitshini kunye neekhawuntari njengoko zidibanisa iikhabhathi ezimnyama nezimhlophe kunye neekhawuntari. Iikhabhathi ezimhlophe zinezixhobo zokubala ze-granite emnyama ngelixa isiqithi esimnyama sendawo sisebenzisa i-countertop emhlophe. Indawo yokubala enoluhlu lokupheka iyaqhubeka ngokudibanisa iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi kunye neekhabhathi ezimnyama zentloko, isitya esimnyama segranite kunye nomhlana omhlophe wethayile.
Ikhitshi lesiNtu elineekhabhathi ezimhlophe kunye nesiqithi somthi esimnyama
Indawo yasekhitshini ivula ngokuthe ngqo kwindawo yokutyela kwaye ihlengahlengisa umbala ofanayo wepeyinti yeendonga kuzo zombini iindonga kunye nophahla olunombumba omhlophe njengokugqamisa. Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zidibanisa kakuhle kunye neendonga ze-beige kwaye zihambelana ngaphandle komthungo kunye nokubumba. Isibini sezinto ezenziwe ngentsimbi ezixhonywe ngaphezulu kwekhawuntari yesiqithi seWalnut songeza kwisibheno sendabuko sendawo kwaye songeza ukukhanya okufudumeleyo kokukhanya kwindawo.
Ikhitshi elimhlophe lekhabhinethi elinesiqithi se-oki kunye ne-beige countertop
Eli khitshi ligcina uthando, isibheno esidala ekukhetheni imibala kunye nokugqitywa. Iingcango ezinkulu zaseFrance zivumela ukukhanya okukhulu kule ndawo, kwenza indawo ibonakale inkulu kwaye ikhanya ngakumbi, ngelixa iindonga ezibomvu-zahlula ikhitshi kuyo yonke indlu. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zimhlophe ngombala weplanga ye-beige, ngelixa ikhawuntari yesiqithi sisebenzisa iOak Natural Natural kwiikhabhathi zayo ezisisiseko kunye neebalusters ezijikiweyo. Ngasentla kukho iziqwenga ezi-3 zezibane ezihonjisiweyo kunye noyilo olucekeceke lwesinyithi, kunye neseti efanayo yezitulo zebar yentsimbi ngombala ompunga.
Iikhabhathi ezimhlophe ekhitshini ezinesiqithi esimnyama
Eli khitshi likhulu lisebenzisa iiplanga ze-Oak phantsi kombala wendalo ukunceda ukufudumeza indawo. Iindonga zonke zipeyintwe ngetoni efudumeleyo engwevu, kunye nokubumba okumhlophe kunye nophahla olumhlophe ocacileyo. Iikhabhathi zekhitshi zonke zinombala omhlophe kwaye zinepaneli yokuyinika isibheno esiqhelekileyo, ngelixa isiqithi esisembindini sivelile kwikhitshi lonke kunye nokusetyenziswa kweenkuni ze-wengue kwisiseko saso. Zonke izinto zokubala zisebenzisa islabha esibhityileyo setafile enombala we-beige kunye nepepile kwaye sisebenzisa ioyile ekhitshiweyo yeoyile kunye nezibane ezibengezelayo.
Ikhitshi emhlophe yekhabhinethi emhlophe enee-countertops ezingwevu ezingwevu
Uyilo olulula lwekhitshi lunika ukugxila kwizinto ezi-diagonal, zibonise iinkcukacha zesilingi ngaphandle kwendawo yekhitshi. Iithayile ze-Backsplash zibekwe zaza zangqinelana, kwaye ikona yekhawuntara yesiqithi yasikwa ukuyinika into edibeneyo. Elinye ikhitshi liya kwiikhabhathi ezimhlophe ezingasetyenziswanga kunye nemiphezulu yeetafile zegreyite emnyama kunye nombala wodonga we-beige.
Ikhitshi elinobunewunewu elineekhabhathi ezimhlophe kunye nesiqithi esikhulu esineebha zesidlo sakusasa
Olu vavanyo lwekhitshi ngemibala eyahlukeneyo kunye noburhabaxa. Imigangatho ngamaplanga aqinileyo eGolide Oak, ngelixa ikhawuntari ephambili yekhitshi ineekhabhathi ezimhlophe ezingaphandle, ikhawuntari yesiqithi kwelinye icala, ineekhabhathi ze-indigo. Zombini zine-countertop emnyama, ngelixa i-backsplash isebenzisa iithayile ezimhlophe ze-ceramic. Iindonga zikukhilimu omdaka kunye nokubumba okumhlophe kunye nophahla, kwaye izitulo zebar ezisetyenzisiweyo ziyintsimbi enombala wobhedu.
Ikhitshi lelizwe elineekhabhathi ezimhlophe kunye neetafile ezimnyama
Kule khitshi yesitayile selizwe, iikhabhathi eziphambili zonke zimhlophe zimhlophe ngesiqithi seWalnut. Izinto zokubala zenziwe ngegranite emnyama ecoliweyo, ngelixa iipompo kunye nezixhobo zombane zonke zigqityiwe ngentsimbi. Iindawo eziveziweyo zeendonga zipeyintwe kwipeyinti enombala opeyintiweyo. I-splashboard yimayile emhlophe yeceramic ekwakhiweni kwezitena, ngelixa splashboard ngasemva koluhlu idibanisa iithayile ezimnyama nezimhlophe zeceramic kuludwe oludibeneyo. Ngaphezulu kwekhawuntara yesiqithi uneziqwenga ezi-2 zezibane ezihonjisiweyo ezigqityiweyo ukugqibezela ukujonga.
Nangona uninzi lwabanini makhaya lukhetha iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini, ayinguye wonke umntu okhetha ukuhamba nale ndlela yoyilo. Iikhabhathi zekhitshi ezinemibala emnyama lukhetho oluphezulu kwabo banomdla wokuzama inkangeleko entsha, ekubeni yindlela yokuhombisa eyaziwayo. Nangona kubonakala ngathi iyaphikisana nombono oqhelekileyo wokuba iikhikhini kufuneka zinomoya kwaye zikhanyise, iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zenza ubungakanani kunye nomdlalo ngaphakathi.
Njengamakhabhathi amhlophe ekhitshini, kukwakho inani lezizathu kunye nezibonelelo zokuba kutheni iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zingasebenza kakuhle ekhayeni lakho. Enye yazo kukuba iikhabhathi ezimnyama zibonelela ngenkangeleko etyebileyo nenhle. Inika idrama kwindawo kwaye isebenza ngokugqibeleleyo kwiikhitshi ezinomxholo.
Iikhabhathi ezimnyama zongeza ukufudumala kwindawo. Nangona kungakhangeli imvakalelo edlamkileyo oyifumana kwiikhabhathi ezimhlophe, izisa ukonwaba okuzolileyo. Iikhabhathi ezinemibala enzulu, umzekelo, yenza ikhitshi lakho lihlale lihle kwaye lihlale ekhaya.
Iikhabhathi ezimnyama zilungele ukudala ubunzulu kunye nokuthelekisa kwisithuba esingenakufezekiswa yimibala ekhanyayo. Yongeza umahluko kunye nobukhulu ekhitshini lakho.
Iikhabhathi ezimnyama zisebenza kakuhle nezimbo zesintu, zangoku nezexesha langoku. Ukukhetha iikhabhathi ezimnyama ezifanelekileyo kuya kuxhomekeka kwisitayile ofuna ukusiphumeza. Ukuba ukhetha ukubonakala okwangoku, bhangqa iikhabhathi zekhitshi ezimnyama okanye ezimnyama ezingwevu ezinomgangatho okhanyayo onqamle phezulu. Unokwenza indawo yangoku ngokongeza iipops zombala kwizixhobo zakho.
Ngelixa, ukuba ujonge isitayile sendabuko, fezekisa olo jongo lucebileyo ngokugqibezela iicherry ezimnyama okanye iikhabhathi zeespresso ezinokubumba, imiphezulu yeetafile zemabula kunye nomgangatho onzima. Iikhikhini ezintle kakhulu zihlala zisebenzisa iikhabhathi ezimnyama ezinesitayile esimhlophe esiqaqambileyo. Iikhitshi zaseMeditera zinokufezekiswa ngombala wekhabhathi ebomvu ebomvu egxininiswe ziitoni zomhlaba.
Ezi ngcebiso zilandelayo ziyilo zinokuqwalaselwa xa kuyilwa iikhitshi zodidi kunye neekhabhathi ezimnyama. Ngokudibanisa nokudibanisa iikhabhathi ezimnyama, jonga ukuba yintoni eza kusebenza ngokudibeneyo nayo yonke eminye imiba yekhitshi lakho kunye nembonakalo yokugqibela ojolise kuyo. Iikhabhathi ezimhlophe kunokuba lula ukuzidibanisa, kodwa iikhabhathi ezinemibala emnyama zifuna ukhathalelo olungaphezulu ukuze zikhuphe kuba umthunzi ngamnye owahlukileyo unefuthe elilodwa. Iikhabhathi ezimnyama zisenokuba mbala omnyama okanye ongwevu ongathathi hlangothi, umbala ococekileyo wokhuni lweCherry, iMahogany okanye i-Espresso, umbala obomvu ngokunzulu, omfusa ocacileyo okanye nokuba phakathi kobusuku buluhlaza.
Kananjalo, njengomthetho oqhelekileyo, ibhalansi yeekhitshi ezimnyama zasekhitshini ngokukhetha umbala okhanyayo weendonga, umgangatho kunye nomphezulu wekhawuntara. Khetha i-countertop ngombala okhanyayo okanye ongathathi hlangothi. Oku kuya kunciphisa ubunzima bokubukeka kwekhitshi lakho. Ubumnyama obuninzi ngamanye amaxesha bunokudakumba, ke yongeza izinto zoyilo ezinokukhulisa ikhitshi lakho.
Umzekelo, ukuba usebenzisa iikhabhathi ezimdaka ngombala omnyama, zibhangqe nge-countertop enemibala egolide. Iicherry ezimnyama kunye neekhabhathi zelnut zinokudityaniswa kunye nomgangatho okhanyayo womthi onzima. Ukuba ukwicala lokulinga ngakumbi, ungazama ukudlala ngombala we-backsplash kunye nezinto eziphathekayo-i-pop ye-graphic coat eluhlaza ekhitshini i-backsplash ehambelana ngokugqibeleleyo neekhabhathi zamalahle amnyama zinokwenza ikhitshi yanamhlanje emangalisayo.
Ikhitshi leKhabinethi emnyama yangoku enesitripthi esingenasici
Kule khitshi yanamhlanje yobudoda, iikhabhathi zasekhitshini zonke zimnyama nge-matte emnyama kunye nokutsalwa komnyango omnyama. Itafile ephambili yekhitshi isebenzisa umphezulu omhlophe oqinileyo, ngelixa ikhawuntari yesiqithi isebenzisa i-countertop yentsimbi engenasici, ukuthelekisa ezinye izinto zombane ezikwintsimbi engenasici. Kwimigangatho, iithayile zamatye e-porcelain kwiithoni ze-beige zazisetyenziswa kwaye kunqunyulwa kumacwecwe amade njengokulinganisa ubungakanani, ukujonga kunye nokuma komgangatho wokhuni, ngaphandle kokukhathazeka ngokonakalisa oko xa kumanzi.
Ikhitshi elikhulu elinamakhabhathi amnyama e-walnut kunye neetafile zegranite eziluhlaza
Ikhitshi eliphangaleleyo elisebenzisa imigangatho yethayile yendalo kumacala ahlukeneyo okusika kunye noxande, kudityaniswe nekhabhathi eziqinileyo zeWalnut kunye neJade Green Granite Countertops. I-backsplash ikwasebenzisa iithayile zamatye, ngelixa ezinye iinxalenye zeendonga kunye neekhabhathi zinee-slats ezithe nkqo zeWalnut eqinileyo. Ikhitshi linendawo yesinyithi yokuqaqambisa indawo esisiqithi sayo.
Iikhabhathi zasekhitshini zaseMahogany ezinombala okhanyayo wegranite
Eli khitshi lihle malunga nomthi. Iibhodi zomgangatho ziingceba eziqinileyo zeMahogany ebomvu, ipolishwe kakuhle ukufezekisa oko kukhanya. Ineeseti zokudibanisa iikhabhathi zasekhitshini kwiMahogany ebomvu kunye nokubumba okugxininisayo. Oku kudityaniswe nokusetyenziswa kwezixhobo zentsimbi ezingenasici, izixhobo zokubala zegranite kunye nokubuyela umva kwelitye. I-nook yesidlo sakusasa iyazahlula kwiithoni zomthi kunye nokusebenzisa kwayo ityhula yommandla wombhoxo kunye neziqwenga zefanitshala ezenziwe ngomthi ezimnyama.
Uyilo lwala maxesha kunye neekhabhathi zekhitshi ezimnyama kunye nemiphezulu yeetafile zemarble
iyunifomu yasemkhosini kumtshato woluntu
Ikhitshi elikhulu lalemihla elidlala ngezinto zekhitshi zale mihla. Kwimigangatho yayo, isebenzisa ulwimi olomeleleyo lwe-oki yegolide kunye ne-groove imigangatho enamatye anganyangekiyo ngamanzi, ngelixa iikhabhathi zilaminishwe ngomthi we-ebony, izibambo zensimbi ezingenasici kunye nezibane zentsimbi ezixhonyiweyo ezingaphezulu kweekhawuntari. I-countertop isebenzisa i-marble ye-beige, kwaye iindonga zisebenzisa umbala we-beige ofanayo.
Iikhabhathi zekhitshi leWalnut ezinezixhobo zokubala zegranite kunye nesiqithi sokubala iinkuni
Le khitshi yodidi inika imvakalelo entle kukhetho lwayo lokugqiba. Kwiikhabhathi zekhitshi zokubala, kusetyenziswa i-walnut enamabala, kunye nokubumba okuneenkcukacha kunye nesithsaba, kufakwe i-countertop yeGranite. Ikhawuntari yesiqithi esikumbindi iya kumnyama, ipeyintiweyo emnyama kwaye ifakwe kwisitya esiqinileyo somthi. I-Splashboard isebenzisa iithayile zeceramic, ngelixa imigangatho yomelele Ipswich Iiplanga zeplanga kunye neendonga zipeyintwe ngombala okhanyayo kakhulu.
Ikhitshi leKhabinethi emnyama yanamhlanje enee-countertops zokhuni
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje luya kubengezela kwaye kube lula. Icandelo elisezantsi lezinto zokubala zasekhitshini ziishelufa ezivulekileyo ezimnyama, ezinezixhasi zentsimbi engenasici, ngelixa iingcango zekhabinethi ephezulu ineglasi yegraphic emnyama enezibambo zentsimbi engenasici. I-countertop isebenzisa i-Oakwood yemvelo epholileyo, i-chamfered kwi-angle kwimida yayo. Ineseti ehambelanayo yomgangatho womthi we-Oak, ngelixa iindonga nophahla zonke zigcinwe kwipeyinti emhlophe ecacileyo.
Uyilo lwala maxesha kunye nekhabhathi ezingwevu zekhitshi kunye nesiqithi esiphikisayo sensimbi
Uyilo lwangoku lwekhitshi oluvavanya kugqityiwe okwahlukileyo kodwa aluhambi ngaphaya kwezinto ezahlukeneyo. Iikhabhathi zonke zikwitoni epholileyo engwevu yee-laminates ezineziphatho zensimbi engenasinxibo, kunye nomphambili womgangatho oqinileyo omhlophe. Ikhawuntara yesiqithi ine-counter ephezulu yokuphakama kwebha kunye ne-countertop egqunywe ngentsimbi engenasici. Iindonga zipeyintwe ngombala ongwevu, logama imigangatho ingekhonkrithi enemibala.
Ikhitshi le-Oak nekhitshi emnyama
Le khitshi inika i-vibe yelizwe ekhitshini kunye neetye zayo zendalo ezenziwe ngamatye. Uburhabaxa bemigangatho bususwa yiminyango yekhabhathi yeGolide Oak egudileyo kunye nodonga olutyheli olutyheli, ngelixa izinto ezifanayo zomgangatho zisetyenziselwa i-splashboard. Isiqithi sasekhitshini siyazibeka ngokwahlukileyo kulwakhiwo kunye nabamnyama phantsi kweekhabhathi, ngelixa isitrato esimnyama seGranite sigcina ukujonga kunye njengoko sisetyenziswa ekhitshini nakwikhawuntara yesiqithi.
Ikhitshi leenkuni zendalo elinesiqithi sakusasa sentsimbi
Eli khitshi libanzi lisebenzisa iikhabhathi zekhitshi zegolide zePecan, ezinika ukukhanya okufudumeleyo kwendawo. Imiphezulu yeetafile ilitye elilitye lendalo kwithoni efudumeleyo ye-beige, kwaye ukusetyenziswa kwemibala efudumeleyo kuyaqhubeka ukuya kwimigangatho esebenzisa iithayile zesileyiti zendalo ezingqongwe ziithayile ezincinci ze-mocha brown. Ukuchasana nemibala efudumeleyo, isinyithi esinyibilikisiweyo kukukhetha ukugqiba izixhobo zekhompyutha kunye nezixhobo ezikweli khitshi. Uyilo lwekhitshi ebutofotofo kunye nendawo yokuhlala isidlo sakusasa ezinje ngale zilungile kwabo banendlela yokuphila exakekileyo okanye abathanda ukonwabisa kunye nokukwazi ukunxulumana nabanye ngelixa upheka okanye ulungisa ukutya.
Ikhitshi elineekhabhathi zetsheri ezinemiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama
Le khitshi yanamhlanje idlala ngendawo yayo enkulu kunye nolwakhiwo olungaqhelekanga ukuyenza ibe mnandi ngakumbi. Iikhabhathi zasekhitshini azinakho ukuhonjiswa kunye nokubumba kwaye zisebenzisa iicherry ezenziwe ngokhuni lweCherry, ngentsimbi yokukhaba. Imiphezulu yeetafile ye-borealis quartz eluhlaza okwesibhakabhaka kunye negranite emnyama yeekhawuntari eziphambili zekhitshi kunye neplashboard yayo. Imigangatho yenziwe ngomthi kwi-oki yendalo kwaye iindonga zigcinwa zimhlophe gca ukunceda ukukhanyisa indawo.
Iikhabhathi ezimbini zethoni ezinomthi wekhitshi ophezu kwesiqithi
Ikhitshi elinomxube wezinto zakudala kunye nezixhobo zangoku zeshishini. Iikhabhathi ezifakwe ipaneli kumhlophe omhlophe kunye ne-china khabhathi epeyintiweyo ngombala oluhlaza okrelekrele zidityanisiwe kunye nezinto zala maxesha ezinje ngezixhobo zentsimbi ezixutywe ngentsimbi kunye nokukhanya kwesitayile sezinto ezixhonywe ngaphezulu kwekhawuntara yesiqithi. Ezi zidityaniswe nomgangatho oqinileyo womthi waseMahogany, kunye nezibini ezilinganayo ze-Mahogany bar stools kunye ne-Mahogany slab eqinile kwi-countertop yesiqithi.
Ikhitshi elinee-mahogany nekhabhathi kunye neSt. Cecilia Granite countertops
Eyona nto imangalisayo kule khitshi iya kuba yikhawuntari yayo yeGiallo St. Cecilia Granite efumaneka kwikhawuntara yesiqithi nakwikhawuntari eziphambili zekhitshi. Umbala wokukhanya kunye nemiphetho egudileyo igcwalisa iikhabhathi zekhitshi ezibomvu zaseMahogany kakuhle. Umgangatho wenziwe ngomthi wobunjineli eMahogany, kwaye kwi-backsplash, kusetyenziswa iithayile ezikhanyayo ze-beige ceramic. Ukuxhoma kwikhawuntara yesiqithi sisibane sephepha elilelethusi kubhedu oxubileyo kunye nokukhanya okumhlophe okufudumeleyo ukunceda ukugcina indawo ikhanya kwaye ijongeka ifudumele.
Iikhabhathi ezimnyama ezimnyama zekhitshi ezinendawo ekuthiwa yi-quartz
Ukusetyenziswa kwetafile ye-quartz emhlophe emhlophe njengokhetho lweetafile zekhitshi kunceda ukwenza le khitshi yanamhlanje ibonakale ikhanya ngokunceda ekuboniseni nasekukhanyiseni ukukhanya ekhitshini. Iindonga zineqhosha elisezantsi elimhlophe, kunye nekhabhathi ekhitshini elaminethiweyo ngombala omnyama. Ngokubuyela umva, iglasi yegraphicote emhlophe yayisetyenziselwa ukugqiba okucocekileyo nokungabinamthungo.
Iikhabhathi ezintle zekhitshi
Le khitshi yomthi uqinileyo ineshushu kwaye imema ukuba uzive. Ukusuka kwiithayile zayo zelitye lendalo kwiithoni ezahlukeneyo kunye nemibala, ukuya kwiikhabhathi zasekhitshini zeWalnut zendalo kunye neetafile yethayile. Umbala ofudumeleyo omhlophe wodonga ugcwalisa iikhabhathi zelnut, kunye nezinto zomthi kunye neziqwenga zefanitshala konke konke kunika eli khitshi ukubukeka kwelizwe.
Iikhabhathi ezimnyama zasekhitshini ezinemiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama
Imibono emininzi yoyilo lwekhitshi yokuqala iqala ngeekhabhathi ezikumgangatho ophezulu Eli khitshi lanamhlanje lisebenzisa iingcango zekhitshi ezizodwa ezenziwe ngephepha kwisitayile se-satin umbala we-wengue onezinto zentsimbi ezinomtsalane kunye nesitripthi segranite emnyama. Imigangatho imhlophe ngokucacileyo kwaye i-backsplash isebenzisa iileyili zamatye. I-backsplash emva koluhlu isebenzisa iithayile ze-ceramic ze-3D ezizodwa kumbala we-mocha brown.
Ikhitshi elineekhabhathi zetsheri kunye nesiqithi somthi wecherry
Eli khitshi livulekileyo lizahlula ngokwalo kwindawo yokuhlala ngokusebenzisa izinto ezahlukeneyo zomgangatho. Imigangatho yendawo yasekhitshini isebenzisa iiplanethi ze-Injini ebomvu eMahogany endaweni yeetiles zeceramic ukuze zibonise ngokwahlukileyo kwezinye izithuba nangona zinombala ofanayo weqanda. Iikhabhathi zekhitshi zinomthi weCherry e-varnished enezinto zokubala zeGiallo Fiorito Granite.
Ikhitshi elineekhabhathi ezimhlophe kunye neetafile zekhithi zegranite ezikhanyayo
Iikhabhathi zasekhitshini kwisitayile esenziwe lula se-neo-classic zazisetyenziswa ekhitshini elinombala omhlophe ogqityiweyo. Umbala omhlophe ocacileyo wezinye iindawo unceda ukuvelisa ingqolowa yemigangatho emihle yamandongomane kule khitshi, kwaye wenze indawo evaliweyo ibonakale ikhanya. Kuba zonke iikhabhathi zigqityiwe ukumhlophe, eli khitshi lidlala ngokujikeleza kweentonga ezahlukeneyo - ikhawuntari ngefestile enkulu isebenzisa igranite ebomvu, ecaleni kwendlela yokupheka ziibali zokubala zegreyite kwaye ikhawuntari yesiqithi isebenzisa umahluko ongwevu okhanyayo ongwevu. Izitulo zebha ene-wengue ene-brown brown upholstery yongeza umahluko kumbala kwisithuba kwaye inegalelo kukongezwa okwamkelekileyo kokuthungwa.
Uyilo lwekhitshi kunye neekhabhathi ezimhlophe kunye neetafile ezimnyama kunye ezimhlophe zegranite
Le khitshi ikwasebenzisa iikhabhathi zesitayile sendabuko ezineenkcukacha zokuhombisa nge-corbel kunye nebrashi yentsimbi engenasici. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zimhlophe ngetafile yetyuwa kunye nepepile yegranite kunye neethayile zamatye ezikhazimlayo. Ikhawuntara yesiqithi ipeyintiwe ngomthunzi ongwevu onemibala ephantsi emfusa ehambelana nombala weesilingi zomthi. Yongeza umbala owamkelekileyo kwindawo kwaye isebenza njengeyona ndawo kugxilwe kuyo ekhitshini.
Ikhitshi elimhlophe lekhabhathi enesiqithi se-oki segolide
Endaweni yemigangatho yokugqiba matte yesiqhelo, esi sithuba sisebenzisa imigangatho yokuhombisa ebengezelayo ebeka iithayile zelitye elikhanyayo ezisetyenziswa kwindawo yekhitshi. Oku kuzisa amehlo akho kwitafile emnyama ene-wengue embindini nge-Oak ephezulu ye-Oak, esebenza njengendawo eyongezelelweyo yokulungiselela okanye itafile encinci yokukhonza. Ngenxa yobume obuvulekileyo bendawo, iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe ezingasasebenziyo ezinesitafile esimnyama esimnyama kunye neethayile ezikhanyayo zelitye elikhanyayo zisebenza njengemvelaphi yokungathathi hlangothi eya kuthi ifanelane ngokulula nayiphi na imibala enokusetyenziselwa amanye amacandelo endlu.
Ikhitshi elimhlophe elinamabala okubala egranite kunye nosiqithi
Eli khitshi linika isibheno esiqhelekileyo kodwa esitsha. Ngelixa ikhabhathi ikhupha imbonakalo yakudala enembonakalo kunye nombala omhlophe ongacacanga, ipeyinti eluhlaza eluhlaza enika umbala omtsha oqaqambileyo kule nkangeleko. Imigangatho ziithayile zemabhile ezintle kunye neepateni zomda omdaka, kwaye i-backsplash isebenzisa iithayile ezimhlophe zeceramic. Kwiphepha lokubala, kwasetyenziswa igranite emnyama eblowu kwaye idityaniswe ngezinto zentsimbi.
Uyilo lwanamhlanje kunye nekhabhathi zekhitshi cream
Le yanamhlanje khitshi ekhrimu Ukujonga imigca ethe tye yeegophe ezinobunkunkqele, kunye nochuku. Imibala ethulisiweyo kunye nembonakalo engacacanga yeli gumbi yonyusa indawo. Udonga lwophahla-kumgangatho weefestile zaseFrance zenza ukukhanya kunye nesofa kunye nendawo yokutya kwasekuseni zibekwe ukuze wonwabe kumbono. Ukucacisa kwimibala ecoliweyo yekrimu kunye nengwevu ecaleni kweendonga ngobuqhetseba kutsala iliso lomntu. Ibha yesiqithi emarmore emhlophe kunye neetowuli ezibekwe ngobulumko zilandela imigca ethambileyo yeli gumbi. Nokuba umgangatho ubonakalisa amagumbi uvakalelo olupheleleyo ngokukhanya kunye nokukhanya okucocekileyo okuphucula izibane ezikhanyayo ezithambileyo ezakhelwe eluphahleni.
Ikhitshi elinemigangatho yomthi, iikhabhathi zemithi zendalo kunye neGiallo St.
Le khitshi ayinalo kuphela ubeko olwahlukileyo, kodwa ukhetho olwahlukileyo lombala wepeyinti eludongeni kwaye ugqibile ngokunjalo. Iindonga zipeyintwe ngombala ofana noMarsala, nophahla olumhlophe olucacileyo, kwaye imiphezulu yeetafile yindawo entle ebhalwe iGiallo St. Cecilia. I-backsplash isebenzisa iithayile zeceramic ezikhumbuza iziqwenga zendalo kwaye iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa iinkuni zendalo ezingagqitywanga nezingagcinwanga.
Ikhitshi elinoyilo lobume begophe
Uninzi lwembono yoyilo lwekhitshi luqala ngeendlela ezingaqhelekanga. Ngaphandle kolwakhiwo lwanamhla olugobileyo lwale ndawo yasekhitshini, ikhethe ukusebenzisa isitayile sendabuko iikhabhathi zekhitshi ezinemithi emhlophe emhlophe ene-graining ebonakalayo. Iikhabhathi zihambelana ngokusondeleyo nombala wamatye e-ceramic tile phantsi kwaye zigqibezela imiphezulu yeetafile ze-beige granite. Inesiqithi esikumbindi eside esikwaziyo ukulungiselela iidiners ezili-10 ezinezitulo zentsimbi ezinezihlalo ezimnyama zevelvet.
Isiqithi sekhitshi elimhlophe nekhitshi elimnyama eliswele kunye neekhabhathi ezimdaka ngombala
Ngomgangatho weplanga obunjineli kunye neendonga zokhilimu okhanyayo, eli khitshi ligcina isibheno esicocekileyo sezinto zangaphakathi zangaphakathi ngaphandle kokusebenzisa iikhabhathi zesitayile sendabuko. Iikhabhathi eziphambili zezomdaka omnyama weWalnut eneenkcukacha ezibunjiweyo kwaye zidityaniswe nekhaphethi yokukhanya yeGranite kunye neethayile zelitye lentlabathi kumqolo obuyela umva. Ikhawuntari enkulu yesiqithi esikwere, nangona kunjalo, igqityiwe ngombala omhlophe ngetafile emileyo yeBlue Pearl. Oku kusebenza njengendawo yokusebenza enesisa eyongezelelweyo kunye nendawo encinci yokutyela efanelekileyo kwisidlo sakusasa kunye nokutya okukhawulezayo.
Ingcibi yekhitshi eneekhabhathi ezikhanyisiweyo zomthi kunye neetafile ezimnyama
Uyilo lwekhitshi lobuchwephesha lunika ininzi yamehlo ekubambeni iinkcukacha ezincinci ngelixa usabonelela ngendawo yokusebenza engaxinananga. Imibala, efana nelitye, iithayile zeblue greyish kunye nemifuno egubungele udonga kwipateni yedayimane. Iishelufa zeKnickknack kunye namanqwanqwa angqonge ezo ndonga kunye nefaskoti ebunjiweyo. I-gingham ebomvu namhlophe iphethini yamakhethini amafutshane afaka umbala kwifestile kwaye itshatise ityali encinci ebekwe phambi kwesinki. Iitafile ezimnyama ngaphezulu kweedrowa zamaplanga kunye nekhabhathi zibonelela ngendawo yokusebenza eninzi ngaphandle kokuthatha indawo yomgangatho.
Ikhitshi lale mihla elineekhabhathi ezimhlophe, imiphezulu yeetafile zekartz kunye nokugcinwa kwewayini
Indawo ephambili yale khitshi yanamhlanje yindawo yokugcina iwayini ebonakalayo. Ungene ngokungagungqi esiphelweni segumbi, i-rack ibonisa iimpahla zayo ngokuzingca ngaphandle kokuthatha indawo enkulu okanye ukuqokelela oku kuyilwa kwekhitshi. Isikimu sombala omhlophe kakhulu kunye nokhilimu sahlukile kumgangatho wawo omnyama onzima, usinika isheen enzulu. Imigca ecocekileyo yale khitshi yenza uninzi lwendawo encinci kwaye ibha yesiqithi ende entle inceda ukwandisa ubude begumbi. Iifestile ezincinci, ezinde zivumela ukukhanya kunye nombala ngekhefu kwiikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe.
Ikhitshi elihle kunye nesiqithi kunye ne-peninsula
Le khitshi ethandekayo inemigangatho ye-travertine kunye neetafile ze-counter ze-granite kunye neenkuni ezikhanyayo ezigqityiweyo zekhabhinethi. Isiqithi sekhitshi siluncedo ekulungiseleleni ukutya kwaye sinomtsalane webala lesiqithi sensimbi. Izixhobo ezingenasici ezifana nefriji enkulu, isitovu kunye nesitovu ngaphezulu zenza umbono owahlukileyo. Izibane ezixhonyiweyo kunye nezibane ezikhanyisiweyo zinika ukukhanya okwaneleyo kwaye zinika ukukhanya okufudumeleyo.
Qhubeka kwiphepha 2 Uyilo lwekhitshi.
Iipilili zomtshato ezi-12 ezintle
Ulahla njani amaBala aMva
Iikhonkco ezingama-38 zeentyatyambo eziGqibeleleyo zeNtwasahlobo (okanye naliphi na ixesha, Ngokwenene)
Umtshakazi Uqhekeza iiWrists Twerking eBachelorette Phambi koMtshato, Ukutshata kwiArm Casts
Indlela yokwenza uhlahlo-lwabiwo mali kwiRing yakho yokuzibandakanya
Ngenye imini uMekia Cox usixelela ukuba ukujonga kwakhe uMtshakazi kwakukhuthazwa njani yiNkosazana uTiana
Isoftware yoyilo lweCloset (eyona nkqubo ilungileyo isimahla yama-21 kunye neNtlawulo)
UJustin Timberlake utyhila ngokuchanekileyo indlela acebise ngayo kuJessica Biel
Intombi endala kaKevin Costner uAnnie utshata kuMtshato waseSanta Barbara: Ifoto
UCamilla Luddington Uthethathethane noGqirha uMateyu Alan
Saber Yakho iNdlela yokuSamkela ngokuBalaseleyo
'Abasandul' ukutshata Unyaka Wokuqala 'Ixesha lesi-3, Isiqendu 6 Ukuphindaphinda: Ukuphela kweBali
Isibini siNgena kwiMagical Christmas yeThemed NYC yokuzibandakanya neefoto
Isibini esitshatileyo se-Olive Garden-Inspired Wedding siphela ngeLate-Night Breadstick Bar
Blake Lively kuRyan Reynolds: NguMhlobo wam osenyongweni
izipho ezinkulu umfazi wakho
ungaba kanjani ngumtshato okwi-intanethi
umdlalo womtshato imibuzo malunga nesibini
iingoma zerock zothando zemitshato
indlela yokucela iintombi eziza kutshata zibekhona emtshatweni wakho
Ufumana njani isihluzo se-snapchat
unxiba njani ibhendi yomtshato
Umtshakazi usongela ukukhaba udade ngaphandle komtshato womtshato ngaphezulu kokucheba iinwele kwangaphambili
Iindawo eziphambili zeCaribbean zokuya eMtshatweni
IPatio yeGrass eyenziweyo (Iipros & Cons)
Iipatio Kunye Needeksi